Dingana 10 hamoronana fanadihadiana an-tserasera mahomby sy mahasarika | Martech Zone
Ny fitaovana fanadihadiana an-tserasera dia mahafinaritra amin'ny fanangonana sy famakafakana angon-drakitra amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Ny fanadihadiana an-tserasera mitambatra tsara dia manome anao fampahalalana azo ampiharina sy mazava ho an'ny fanapahan-kevitry ny orinasanao. Ny fandaniana ny fotoana ilaina mialoha sy ny fananganana fanadihadiana an-tserasera lehibe dia hanampy anao hahatratra ny tahan'ny valin-kafatra ambony kokoa, sy ny angon-drakitra avo lenta kokoa ary ho mora kokoa amin'ireo mpamaly anao ny hamita azy.
Ireto misy dingana 10 hanampiana anao mamorona fanadihadiana mahomby, ampitomboy ny tahan'ny valin'ny fanadihadiana nataonao, ary manatsara ny kalitaon'ny data rehetra angoninao.
Farito mazava ny tanjon'ny fanadihadiana nataonao - Ny fanadihadiana tsara dia manana tanjona mifantoka izay mora azo. Mandania fotoana mialoha hamantarana ny tanjonao. Ny fandrindrana mialoha dia manampy amin'ny fahazoana antoka fa mametraka fanontaniana tsara ny fanadihadiana mba hanatratrarana ny tanjona ary hiteraka angona mahasoa.
Ataovy fohy sy mifantoka ny fanadihadiana - Fanampiana fohy sy mifantoka amin'ny kalitao sy ny habetsahan'ny valiny. Amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa ny mifantoka amin'ny tanjona tokana toy izay manandrana mamorona fanadihadiana master izay mahasahana tanjona maromaro. Nasehon'ny fikarohana (miaraka amin'i Gallop sy ny hafa) fa tokony haharitra 5 minitra na latsaka kely vao vita ny fanadihadiana. 6 - 10 minitra dia azo ekena fa hitantsika ny tahan'ny fandaozana lehibe mitranga rehefa afaka 11 minitra.
Ataovy tsotra ny fanontaniana - Ataovy azo antoka fa tonga amin'ny teboka ny fanontanianao ary ialao ny fampiasana jargon, slang, na fanafohezana.
Mampiasà fanontaniana mihidy raha azo atao – Manome safidy manokana ho an'ny mpamaly (oh: Eny na Tsia) ny fanontaniana fanadihadiana mihidy, manamora ny famakafakana ny valiny. Ny fanontaniana mihidy dia mety maka endrika eny/tsia, safidy maromaro, na mizana naoty.
Tohizo hatrany ny fanontaniana momba ny mari-pamantarana naoty mandritra ny fanadihadiana - Ny mizana naoty dia fomba tsara handrefesana sy hampitahana ireo fari-pahalalana. Raha misafidy ny hampiasa mizana naoty ianao (ohatra 1 ka hatramin'ny 5) dia tazony tsy hiova izy ireo mandritra ny fanadihadiana. Ampiasao ny isa mitovy amin'ny mari-pamantarana ary ataovy azo antoka fa ny dikan'ny avo sy ny ambany dia tsy miova mandritra ny fanadihadiana. Mampiasà isa hafahafa ihany koa amin'ny maridrefy naoty mba hanamora ny famakafakana angona.
Fanafarana lojika – Ataovy azo antoka fa mizotra araka ny lojika ny fanadihadianao. Atombohy amin'ny teny fampidirana fohy izay mandrisika ny mpanao fanadihadiana hamita ny fanadihadiana (oh Ampio izahay hanatsara ny tolotray ho anao. Valio azafady ity fanadihadiana fohy manaraka ity). Manaraka izany dia tsara ny manomboka amin'ny fanontaniana mivelatra kokoa ary avy eo miroso amin'ireo tery kokoa amin'ny sehatra. Farany, manangona angon-drakitra momba ny demografika ary mametraha fanontaniana saropady any amin'ny farany (raha tsy mampiasa an'io fampahalalana io ianao mba hijerena ireo mpandray anjara amin'ny fanadihadiana).
Andramo mialoha ny fanadihadianao – Ataovy azo antoka fa manao fitiliana mialoha ny fanadihadianao miaraka amin'ny mpikambana vitsivitsy amin'ny mpihaino kendrena anao sy/na mpiara-miasa ianao mba hahitanao ireo olana sy fandikana fanontaniana tsy ampoizina.
Diniho ny fotoananao rehefa mandefa fanasana amin'ny fanadihadiana - Ny antontan'isa vao haingana dia mampiseho ny tahan'ny fisokafana sy ny fipihana ambony indrindra amin'ny Alatsinainy, Zoma ary Alahady. Ankoatr'izay, ny fikarohanay dia mampiseho fa ny kalitaon'ny valin'ny fanadihadiana dia tsy miovaova isan'andro amin'ny faran'ny herinandro.
Mandefasa fampahatsiahivana mailaka amin'ny fanadihadiana – Na dia tsy mety amin'ny fanadihadiana rehetra aza, ny fandefasana fampahatsiahivana ho an'ireo izay mbola tsy namaly teo aloha dia matetika mety hampisondrotra ny tahan'ny valiny. Ataovy azo antoka ny hampiditra ny antony maha-zava-dehibe ny fanadihadiana sy ny fiantraikan'ny vokatra amin'ny traikefan'ny mpanjifa.
Diniho ny fanentanana - Miankina amin'ny karazana fanadihadiana sy fanadihadiana, ny fanomezana famporisihana dia matetika mahomby amin'ny fanatsarana ny tahan'ny valiny. Tian'ny olona ny hevitra hahazoana zavatra amin'ny fotoanany. Azonao atao ny manandrana manandrana valisoa ara-bola, fihenam-bidy, na famonoan-tena aza mba hahazoana loka lehibe kokoa. Mitandrema, na izany aza… na dia mety hampitombo ny fahavitan'ny fanadihadiana aza ny fandrisihana ny fanadihadiana, dia mety tsy hahasarika ny mpihaino kendrena foana izany.
Typeform Resadresaka fanadihadiana
BONUS: Mampiasa sehatra toy ny Typeform izay mampiasa fomba fanadihadiana amin'ny fomba fifampiresahana. Antsoina koa hoe fampahafantarana miandalana izany… rehefa tsy sahiran-tsaina amin'ny traikefa ny mpampiasa fa sendra fanontaniana fanadihadiana iray isaky ny mandeha.
Vonona hanomboka? Ampiharo ireo dingana etsy ambony, atombohy ny fanadihadianao ary miomàna hamakafaka ny vokatrao amin'ny fotoana tena izy. Mampiasa fanadihadiana an-tserasera ho an'ny orinasanao ve ianao izao? Hitanao fa mahasoa ireto torohevitra ireto? Miangavy anao hiditra amin'ny resaka ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Amboary ny fanadihadiana Typeform voalohany anao
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i Typeform ary mampiasa ny rohy mifandray amiko amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: fanadihadiana fifampiresahanaahoana nofanadihadiana amin'ny findaytorohevitra amin'ny fanadihadiana an-tseraserafanadihadiana mialoha ny fitsapanafampandrenesana miandalanamizana mizanafampiharana fanadihadianafampahatsiahivana mailaka fanadihadianahalavan'ny fanadihadianabaiko fanadihadianasehatra fanadihadianafanadihadianafitiliana fanadihadianatoro-hevitra momba ny fanadihadianafitaovana fanadihadianakarazana endrika
Tsy misy intsony ny fomba fiasa vaovao amin'ny dokambarotra nomerika taorian'ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo
26 Novambra 2014 à 6:22
Misaotra anao amin'ny torohevitra mahafinaritra toy izany :)